Muvaki → Landscape mugadziri • wemukati mugadziri • Mari yakawanda iyo mugadziri anowana?
Muvaki inoshanda mukuronga uye dhizaini yechivakwa kana dhizaini. Vagadziri vanokwanisa kuongorora pfungwa kana mazano evatengi vavo uye kugadzira akasiyana ezvivakwa zvekuvaka zvakavakirwa pavari.
Basa remugadziri rinogona kusiyana: mamwe anogadzira matanho ekugadzira zvivakwa zvekugara kana zvekutengesa, vamwe vachitarisisa kutarisisa, kuronga kwemadhorobha, zvemukati uye girini yekugadzira. Iko zvakare kune bazi rekuvaka iro rinoshanda nemahofisi emaindasitiri.
Pazasi isu ticha nyatso tarisa pamabasa maviri - zvemukati muvaki uye landscape muvaki. Chimwe nechimwe chazvo chine hunhu hwacho uye chinoda hunyanzvi uye ruzivo rwakasiyana.
Vagadziri venzvimbo vanogona kunakisa nzvimbo dzekunze, asi vanoshandisa yakawanda yenguva yavo mumahofisi, vachigadzira uye kugadzirisa zvirongwa, kugadzirira mutengo wemutengo uye vatengi vemusangano. Nekudaro, izvi hazvireve kuti varidzi vezvipenga havashandisi nguva munzvimbo dzavanoshanda kana panzvimbo inogadzirwa chirongwa chavo.
Vazhinji vagadziri vekugadzira matombo vanoshanda mumaindasitiri ezvekuvaka uye enjiniya. Vamwe vacho vanoshandira makambani ekushandira anoshanda nemamiriro ekunze.
Unyanzvi uye kukwikwidzana kwemugadziri wenyika
Kuti ubudirire, mugadziri wezvemamiriro ekunze anofanirwa kuve neanotevera hunyanzvi hunyanzvi nehunhu hwomunhu:
zvisikwa - zvinokutendera iwe kugadzira dzakanaka nzvimbo dzekunze idzo dzinozoshandawo
kushingairira kuteerera - izvi zvinokutendera iwe kuti unzwisise izvo zvinodiwa uye zvishuwo zvevatengi
kutaurirana nemuromo - muvaki anofanirwa kupa ruzivo kune vatengi vake
kuverenga komputa - tekinoroji inoita basa rakakura mune iri basa, kusanganisira software yakadai seCADD yekugadzirira modhi uye Geographic Information Systems
Mabasa uye mabasa emugadziri wenyika
Iri basa rinowanzoita kusangana nevatengi, mainjiniya, uye vagadziri vekuvaka uye nekukudziridza hukama uhwu kuratidzira mikana yekugadzirisa matambudziko uye kuziva zvinodiwa.
Izvo zvakakoshawo kufunga nezvezvakatipoteredza zvinhu zvakadai sekudonha kwemvura uye kuwanikwa kwesimba kana uchishanda. Hakuna paki inogona kugadzirwa pasina gadziriro yemasaiti hurongwa uye mifananidzo inomiririra yezvirongwa uchishandisa komputa yakabatsira dhizaini uye kugadzira software (CADD). Iyo inogadzira mamiriro inogadzirisawo mutengo wemutengo uye inochengetedza bhajeti reprojekiti. Haisi hazvo basa rebasa.
Dhizaini yezvivakwa zvekugara
Vagadziri vemukati meimba vanoshanda padhuze nevatengi kuti vaone zvavanoda uye zvishuwo zveimwe imba kana imba yese. Mune zvimwe zviitiko, ivo vanopa hunyanzvi hwekugadzira chirongwa chitsva chekuvaka. Ivo zvakare vanobatsira kugadzira imwe yekugara nzvimbo mukati kana kunze kwechivako. Mazhinji maodha anosanganisira kusangana nevatengi kakati wandei, kugadzira dhizaini, uye kupa fenicha sarudzo, pendi sampuli, pasi, uye magetsi kusarudza.
Semagadzirirwo emafurati, dhizaini yekutengesa inotevera maitiro akafanana asi pamwero mukuru. Vashambadziri vemukati magadzirirwo vanoongorora kushanda, kusimudzira, vatengi chiratidzo chemufananidzo uye bhizinesi nharaunda zvinhu. Mapurojekiti anofanira kusangana nevatengi bhajeti uye zvinodiwa nenguva. Mune zvimwe zviitiko, vagadziri vezvokutengesa vanofanirwa kugadzira dhizaini inobvumidza basa kuenderera mberi panguva yekuiswa.
A Portfolio ingori gwaro rinopa nyanzvi inyaya kuburikidza nemufananidzo, zvinyorwa, kuumbwa uye chimiro. Kune mhando dzakawanda dzadzo sezvo paine vanhu vari kuita basa iri. A portfolio inogona yakazara yakazara digital, yakazara analog, kana musanganiswa weiyo miviri. Dhipatimendi rekambani yako reHuman Resources department rinongoda kutumirwa kwedhijitari, kununurwa kuburikidza newebhu portal.
A yakanaka portfolio inonyanya kuve neyakanaka mapurojekiti. Kana paine akawanda acho mugadziri kana muvhenganisi account, zvirinani. Zvakaitika zvine basa rakakura pabasa iri.
Vagadziri vanogadzira dzimba, zvivakwa uye zvimwe zvinhu. Aya magadzirirwo anoshandiswa kwezvivakwa zvitsva, kuvandudza, kugadzirisa uye kuwedzeredza kwezvivakwa zviripo. Vanoitawo basa rakakosha mukugadzirisa patsva, kugadzirisa uye kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa kana zvakakanganisika, kusanganisira zvivakwa zvakadzivirirwa, dzimba dzekugara uye zvivakwa. Iyo mugadziri anobatanidzwa mukuita kwese kwekuvaka, kubva kwekutanga dhizaini, dhizaini uye mhando dzechirongwa, kune shanduko zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Iyo mugadziri inoshanda pamwe nevamwe vashandi vekuvaka muchirongwa chose, nekupa yakakosha zasi pasi kune yakanyanya kunaka ruzivo, pasi pacho pakupedzisira kuongororwa uye kubvumidzwa.
Mari yakawanda sei mugadziri anowana?
Wages inoenderana zvakanyanya nenzvimbo yebasa uye chiyero chechiitiko. Vagadziri nyanzvi vane hunyanzvi vanogona kuita kwakasiyana basa rakadzama, sekudhirowa mapurojekiti, kushanyira nzvimbo dzemapurojekiti, uye kuudza mugadziri anotarisira iro basa.
Semunhu anozvishandira mugadziri iwe unogona kutarisira pane imwe nhanho yerusununguko maererano nemaawa ekushanda uye sarudzo yeprojekiti. Kuwanda kwebasa rehofisi uye chaiyo dhizaini inokura uine ruzivo uye kuvimba.
Sezvo ruzivo ruchikura uye mitoro ichichinja - saka nemubhadharo. Naizvozvo, zvakaoma kutaura zvisina kujeka kuti yakawanda sei mugadziri anowana.
muvakimuvaki wezvekuvakamuvaki weCzęstochowamugadziri katowiceLandscape muvakimuvaki weKrakakowmuvaki wechikepemuvaki Lublinmugadziri mutsva musikamugadziri poznańmuvaki Szczecinmugadziri warawzvemukati muvakizvemukati muvaki weKrakakowyomukati mezvivakwa chikepezvemukati mugadziri poznańzvemukati dhizaini Szczecinzvemukati mugadziri warawzvemukati mugadziri wrocławmugadziri Wrocławmuvaki wemariyakawanda sei iyo yemukati mugadziri inowanaanogadzira muvakimuvaki portfoliobasa rekugadziralandscape muvaki basamhizha yekugadzirabasa rekugadzira